BABAMBE UMKHULEKO WOKULWA NECORONA – Sivubela intuthuko Newspaper
uSodolobha uKhansela Mdlalose ekanye nabefundisi
IMEYA yoMkhandlu waseMandeni, uKhansela Thabani Mdlalose osanda kuphonsa umbalane kwisifo iCorona ebesimhaqile inxusa amakholwa akule ndawo ukuba akhuleke angaphezi ukuze bonke abahaqekile bezolulama ngokushesha.
Ikhulume kanjena emkhulekweni wamahlelo ehlukene akhona kule ndawo obubanjelwe esakhiweni samaWeseli esiseRed Hill.
Ikhuluma emkhulekweni iMeya uMdlalose ithe: “Lesi yisikhathi sokuba amakholwa akhuleke kakhulu anxuse uNkulunkulu ukuba angenelele kulesi simo esinzima kangaka esibhekene naso. Umkhuleko yiyona nto esiyethemba ngaphezulu kwezinto zonke. Yingakho namhlanje sikubone kumqoka ukuba sihlanganyele ndawonye sikhuleke.”
UKhansela Mdlalose uthe okumele kuqale kubonakale emabandleni wubumbano lweqininiso. Uthe akukho ke okungama endleleni yamakholwa abumbene futhi akholelwa entweni eyodwa.
“Nginxusa ukuthi kubekhona uthando nobumbano lweqiniso phakathi kwawo wonke amahlelo akhona lapha eMandeni. Uma sibumbene ngikholwa wukuthi kuyoba lula nokuthi siyinqobe kalula iCorona,” usho kanje.
IMeya ithe uma sekukhulekiwe kumele umphakathi uqhubeke wenze konke okusemandleni ngenhloso yokuqikekela ukuthi alibhebhetheki mawala leli gciwane. Ukhumbuze ebebehambele inkonzo ngezindlela esekukhulunywe ngazo kaningi zokugwema ukusabalala mawala kwaleli gciwane.
“Ukuthi izwe uMengameli uselibeke kwisigaba sesibili lokho akusho ukuthi sekumele senze noma yikanjani. Kodwa kunalokho kumele siqikekele kakhulu kunakuqala,” usho kanje.
Isihlava sokuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanye nabantwana osekuphenduke insakavukela nakho iMeya ithe kumqoka kakhulu ukuba amakholwa akubike kuNkulunkulu.
UMfu Olga Dlamini onguMholi weSekethe yamaWeseli yaseMandeni futhi onguSekela Bhishobhi kwisiFunda, iNatal Coastal ungomunye wabaholi bezeNkolo obephambili emkhulekweni. Uthe amakholwa anamandla okunqoba konke inqobo nje uma emethemba ngeqiniso uNkulunkulu.